ifestile yomnyango we-aluminium -- fscyal.com
Iingcango ze-Aluminiyam zokuqhawula i-thermal kunye neefestile lunye uhlobo lomnyango & ifestile esebenzisa iiprofayili ze-aluminiyam yebhulorho egqunyiweyo kunye neglasi yokugquma, ezinemisebenzi yokonga amandla, ukuvala isandi, ukuthintela ingxolo, ingenathuli kwaye ingangeni manzi. I-coefficient ye-thermal conductivity yeengcango ze-aluminium zebhulorho kunye neefestile zingaphantsi kwe-3W / ㎡ · U-K, okunciphisa ukulahleka kobushushu ngesiqingatha xa kuthelekiswa neengcango eziqhelekileyo kunye neefestile, kunciphisa iindleko zokufudumeza malunga 30%
Aluminiyam Thermal ikhefu umnyango&window
Iingcango ze-Aluminiyam zokuqhawula i-thermal kunye neefestile lunye uhlobo lomnyango & ifestile esebenzisa iiprofayili ze-aluminiyam yebhulorho egqunyiweyo kunye neglasi yokugquma, ezinemisebenzi yokonga amandla, ukuvala isandi, ukuthintela ingxolo, ingenathuli kwaye ingangeni manzi. I-coefficient ye-thermal conductivity yeengcango ze-aluminium zebhulorho kunye neefestile zingaphantsi kwe-3W / ㎡ · U-K, okunciphisa ukulahleka kobushushu ngesiqingatha xa kuthelekiswa neengcango eziqhelekileyo kunye neefestile, kunciphisa iindleko zokufudumeza malunga 30%, Ukugquma isandi kungaphezulu 29 iidecibels, kwaye inobunzima bamanzi kunye nomoya omhle.Zimbini iindlela eziphambili zokuvelisa iiprofayili ezikhusela ubushushu. Enye kukusebenzisa imichilo yokukhusela ukushisa kunye neeprofayili ze-aluminium ukwenza "iibhulorho zokugquma" ngokuvula izinyo ngoomatshini, ukugqobhoza, kunye neenkqubo zokuqengqeleka. Olunye uhlobo kukutofa izinto ezikhusela ubushushu kumngxunya okhusela ubushushu weprofayili yealluminiyam., kwaye emva koko uqinise kwaye ususe intsimbi yebhulorho eyaphukileyo ukwenza a "ibhulorho ekhusela ubushushu", ebizwa ngokuba a "cast-udidi" iprofayili yokukhusela ukushisa. KwiAluminiyam yeChangyYuan, uya kufumana ifestile ye-aluminiyam yokuphumla kwe-thermal kunye nomnyango ngolu hlobo: Ifestile entsha yeSwing, Iiglasi ezininzi zokukhuselwa kokusingqongileyo kunye nefestile yokugcina amandla, Iingcango kunye neefestile ze-aluminiyam ezihlanganisiweyo kunye neengcango ezinemibala ye-aluminiyam yebhulorho kunye neefestile.
Iinzuzo ezinkulu ze-thermal break aluminium window kunye nomnyango:
1.Ukunciphisa ukuqhutyelwa kobushushu: I-thermal conductivity yeeprofayili zebhulorho ye-aluminium insulated yi 1.8 ～ 5W / ㎡ · k, engaphantsi kakhulu kuneeprofayili zealluminiyam eziqhelekileyo ze 140 ～ 170W / ㎡ · k. I-conductivity ye-thermal yesakhiwo seglasi engenanto iyamkelwa. Yi 2.0 ～ 3.59W / m2 · k, ephantsi kakhulu kuneeprofayili zealluminiyam eziqhelekileyo 6.69 ～ 6.84W / ㎡ · k, okunciphisa ngokufanelekileyo ubushushu obudluliselwa ngeengcango kunye neefestile.
2.Thintela ukujiya: Ubushushu bomgangatho wangaphakathi weprofayili kunye nomgca wokushisa ubushushu busondele kwiqondo lokushisa langaphakathi, ukunciphisa amathuba okuba ukufuma kwangaphakathi kugxininise kumphezulu weprofayili ngenxa ye-supersaturation.
3.Ukonga amandla: Ebusika, isakhelo sefestile esinomgca wokugquma singanciphisa 1/3 yobushushu obulahlekileyo kwisakhelo sefestile; ehlotyeni, ukuba ine-air-conditioning, isakhelo sefestile esinomgca wokugquma singaba ngaphezulu Nciphisa ilahleko yamandla
4.Khusela okusingqongileyo: Ngokusetyenziswa kweenkqubo zokufakelwa kwe-thermal, ukusetyenziswa kwamandla kungancitshiswa, ngelixa i-radiation yokusingqongileyo ngenxa ye-air conditioning kunye nokufudumeza iyancipha. Iluncedo kwimpilo: Ukutshintshana kobushushu phakathi komzimba womntu kunye nokusingqongileyo kuxhomekeke kubushushu bomoya wangaphakathi, isantya sokuhamba komoya, kunye nobushushu bomoya wangaphandle. Ngokulungelelanisa ukushisa kwangaphakathi kweengcango kunye neefestile ukuze kungabi ngaphantsi 12 ～ 13 ℃, eyona ndawo ikhululekileyo ifikelelwe.
5.Ukunciphisa ingxolo: Ukusetyenziswa kwezakhiwo zeglasi ezingenanto ezinobunzima obahlukeneyo kunye nolwakhiwo olungenanto lweprofayile ye-aluminiyam yebhulorho egqunyiweyo inokunciphisa ngokufanelekileyo impembelelo ye-resonance yamaza esandi., thintela ukuhanjiswa kwesandi, kwaye unciphise ingxolo ngaphezulu kwe-30dB.
6.Imibala eyahlukeneyo: Iiprofayili ze-Aluminiyam ezinemibala eyahlukeneyo zinokuveliswa emva konyango lomphezulu nge-anodizing, ukutshiza ngomgubo, kunye nokutshiza nge-fluorocarbon. Emva kokuqengqeleka kunye nokudibanisa, iingcango zealluminiyam ezigqunyiweyo kunye neefestile zingenziwa ngaphakathi nangaphandle iifestile ezinemibala emibini enemibala eyahlukeneyo..
4.Zonke izinto zealuminium zenziwe ngumzi mveliso wethu, lawula umgangatho kwasekuqaleni.
Iimpawu：ucango lwekhefu lwe-aluminium thermal & window, ucango lwekhefu lwe-aluminium thermal & window uMvelisi, ucango lwekhefu lwe-aluminium thermal & window Supplier, iprofayile yealuminium, iprofayile yealuminium yemizi mveliso